At 8/13/2012 09:57:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအကြား စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အမြန် ဆုံး တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ အဖြေရှာတဲ့ ဆွေနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို ရန်ကုန်မြို့ ပန်ဒါဟိုတယ်မှာ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်း က ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဦးသိန်းစိန်အနေ နဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအရေ တွ့ ဆုံေ ဆွးနွေး ဖို့ ဆုံးဖြတ် ထားပြီး (၂၀၁၅)ခုနှစ် မတိုင်ခင် ရလဒ်အဖြေတစ်ခုရရှိအောင် ကြိုးပမ်းေ ဆာင်ရွက်သွား လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း မြန်မာ အီးဂရက် အဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးတင်မောင်သန်း က ဆွေးနွေးပွဲ မှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
At 8/13/2012 09:30:00 PM No comments:
At 8/13/2012 09:25:00 PM No comments:
At 8/13/2012 08:40:00 PM No comments:
အလုပ်ကြိုးစားသူ၊ ရိုးသားတည်ငြိမ်စွာ နေတတ်သူ အဖြစ် တပ်မတော်(ရေ) မိသားစု များအတွင်း ထင်ရှားသူ စစ်တက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ် (၁၆) ဆင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဥာဏ်ထွန်းအား ဒုသမ္မတလောင်း အဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်သည်ဟု မြန်မာပြည်က လာသော သတင်းများအရသိရသည်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဥာဏ်ထွန်း သည် ယခု စက်မှု့ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း နောက် ရေတပ် အကြီးအကဲ ဖြစ်လာသူဖြစ်သည်။ပြည်သူများနှင့် သမ္မတကြီး
At 8/13/2012 08:10:00 PM 8 comments:
At 8/13/2012 07:52:00 PM No comments:
At 8/13/2012 07:47:00 PM No comments:
ယခုအခါ နိုင်ငံတော်တရား စီရင်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ပုဂ်္ဂိုလ်များရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များ၊ပိုင်ဆိုင်မှုများကို တန်ဖိုးနှင့် တကွ စာရင်းပြု စုပြီး နိုင်ငံတော် သမ္မတထံပေးပို့ရမယ်လို့ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ်္ဂိုလ် အသီးသီးထံ ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရပါတယ်။ ယင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ နေ ပည်တော် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမတွင် မီဒီယာတွေ့ဆုံ ပွဲ၌စက်မှုဝန်ကြီး ဌာနြ ပည်ေ ထာင်စု ၀န်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက ““ဘယ်သူ့ကို လာဘ်ပေးရတယ်ဆိုတာ တိတိ ကျကျပြော၊သိပ်တိကျရင်
At 8/13/2012 07:41:00 PM 1 comment:
ပြည်ထောင်စု သမ္မတြ မန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်အား အမေရိက န်နိုင်ငံ ၀ါရှင်တန် အခြေစိုက် အမေရိကား အသံ (VOA)မှ မြန်မာပိုင်းဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်းက ယနေ့ သြဂုတ် ၁၃ရက် ညနေပိုင်းတွင် အင်တာဗျုးေ တွ့ဆုံမေးမြန်း လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
At 8/13/2012 05:11:00 PM No comments:
အီဂျစ် သမ္မတသစ် Mohamed Morsi ဟာ အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ ထိပ်ဆုံး စစ်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကို ရာထူးကနေ ဖယ်ရှားလိုက်ပါပြီ။ ကာကွယ်ေ ရးဝန်ကြီး Mohammed Hussein Tantawi နဲ့ အီဂျစ်စစ်တပ်ဦးစီးချုပ် Sami Annan တို့ကို ရာထူးကနေ အငြိမ်းစားပေး လိုက်ပြီဆိုပြီးြေ ကညာသွား တာပါ။ စစ်သွေးကြွတွေကနေ အီဂျစ်စစ်သား ၁၇ ဦးကို မကြာခင်က သတ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်၊ မြောက်ပိုင်း Sinai နယ်မြေ စစ်ဆင်ရေးတွေအပေါ် တင်းမာမှုဖြစ်နေချိန်မှာ
At 8/13/2012 04:23:00 PM No comments:
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အီရန် ငလျင်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် အကူအညီပေး ဖို့ကမ်းလှမ်း လိုက်ပြီး၊ သေဆုံးသူတွေအတွက် ၀မ်းနည်းပါကြောင်း အီရန်ပြည်သူတွေကို အမှာစကားပါး လိုက်ပါတယ်။ ဒီလို သဘာဝ ဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ အမေရိကန်ြ ပ ည်ေ ထာင်စုက အီရန်ပြ ည်သူေ တွနဲ့အတူ ရပ်တည်နေ သ လို အထော က်အပံ့ေ တွေ ပးဖို့ အဆင်သင့်ရှိပါကြောင်း အိမ်ြ ဖူေ တာ် ရဲ့ ကြေ ညာ ချက်မှာဖော်ပြလိုက်ပေမဲ့ အီရန်အစိုးရကိုတော့ ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။
At 8/13/2012 04:21:00 PM No comments:
Microsoft ကနေပြီးတော့ Windows7ထက်ပို၍ update ဖြစ်သော Windows 8 developer review version ကို 2011 Customer Electronic show တွင် ပထမဦးဆုံးပွဲထုတ်ခဲ.ပါတယ်။ နောက်ဆုံး version ဖြစ်တဲ. Windows 8 Consumer Preview ကို microsoft က 29 February 2012 နေ.တွင် မိတ်ဆက်ပြသခဲ.ပါတယ်။Windows 8 ကို metro-style interface ဖြင့် ပုံဖော်ထားပြီး touchscreen, mouse, keyboard, pen input တို့ဖြင့် လွယ်ကူစွာ အသုံးပြု နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။Windows 8 ဟာ Intel , AMD တို. ရဲ. microprocessors များတွင် သာမက ARM mobile processor architecture များတွင်ပါ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။ Window server 8 ကို Server version အနေနဲ. ဖြင့်လည်း ထွက် ရှိခဲ.ပါတယ်။
At 8/13/2012 03:59:00 PM No comments:
ဟာ့ဂ်ျ ဘုရားဖူးသွားရောက်ခွင့် ဗီဇာကို ခရီးသွားလုပ်ငန်းအချို့သာ ရရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အစ္စလာမ် ဘာသာ ၀င် အချို့ သာသနာရေး ဦးစီးဋ္ဌာနရုံး ရှေ့တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်လျှက်ရှိသည်ဟု YPI သတင်းေ ထာ က် က သတင်းပေးပို့သည်။ ယနေ့နေ့လည်ပိုင်းက ၁၀ ဦးကော်မတီက ဘုရားဖူး သွားရော က်သည့်ကိ စ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သာသနာရေးဦးစီးဋ္ဌာနနှင့် သွားရောက်ဆွေးနွေးအပြီး ယခုကဲ့သို့ဆန္ဒပြမှု ဖြစ်ပွားလျှက်ရြှိ ခင်း ဖြစ်သည်။
At 8/13/2012 03:43:00 PM No comments:
At 8/13/2012 03:39:00 PM No comments:
At 8/13/2012 03:32:00 PM No comments:
At 8/13/2012 03:25:00 PM No comments:
At 8/13/2012 03:06:00 PM No comments:
At 8/13/2012 02:35:00 PM No comments:
At 8/13/2012 02:02:00 PM No comments:
၂၄.၇.၂၀၁၂ မနက် (၉) နာရီ ခွဲလောက်က ဖျာပုံမြို့ အ.ထ.က (၃) ကျောင်းရှေ့မှာ အပြောင်ကျေးရွာက နှစ်တန်းကျောင်းသူလေး မလှိုင်းသဇင် (အဘ – ဦးထွန်းဝေ) ကို ဆိုင်ကယ်တစ်စီးက ၀င်တိုက်မိခဲ့ ပါတယ်။ မလှိုင်းသဇင်ဟာ ကျောင်းရှေ့ လမ်းနံဘေး မှာ သူငယ်ချင်းတွေကို ရပ်စောင့်နေခိုက် အရှိန်ပြ င်းပြ င်းနဲ့ မောင်း လာတဲ့ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးက လမ်းပေါ်က ဆိုက္ကား တစ်စီးကို ရှောင်ရင်းကနေ လမ်းဘေးမှာရပ်နေတဲ့ ကလေးမေ လး ကို ပွတ်တိုက် မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ပိုင်းကျောင်းတက်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့် ကျောင်းရှေ့မှာ
At 8/13/2012 01:54:00 PM 1 comment:
At 8/13/2012 01:37:00 PM No comments:
ဆက်စပ် ဖတ်ရှု့ ရန် - ဒုသမ္မတအသစ်တစ်ယောက် ရွေးလိုက်ကြရအောင်
At 8/13/2012 01:30:00 PM No comments:
မုံရွာမြို့ ဘုရားကြီးရပ်ကွက် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းရှိ ဒေါ်ဝင်းပပ ၄၃ နှစ် (ဘ) ဦးဝင်းမောင်ပိုင် ''ရွှေသဒေါင်း'' ကုန်မာ ဆိုင် သို့ သြဂုတ် ၈ ရက် ညနေ ၄ နာရီခွဲ က ကျော်စိုးဝင်း ၃၁ နှစ် (ဘ) ဦးညိုေ အး ရွှေဘုံ သာကျေးရွာ မြောင်မြို့နယ် နေသူသည် ကုန်ပစ္စည်းများကို မသင်္ကာဖွယ် ၅ဝဝဝ တန် ငွေစက္ကူ များဖြင့် ဝယ် ယူေ နကြောင်း သတင်းအရ မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုတိယရဲအုပ်လှကြည်နှင့် ဒုတိယ ရဲအုပ် ခင်မောင်ဦးတို့ ပါဝင် သည့် ပူးပေါင်း အဖွဲ့က စစ်ဆေးရာ ကျော်စိုးဝင်းထံမှ ၅ဝဝဝ တန် ငွေစက္ကူ အတု ၃၇ ရွက်ကို သိမ်းဆ ည်း ရမိခဲ့သည်။
At 8/13/2012 01:16:00 PM No comments:
ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နိုင်ရေးသည် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တွေ့ဆုံလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးရုံမျှနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရ ပြီဟု မဆိုနိုင်ဘဲ ထိလွယ်ရှလွယ်သော အခြေအနေဖြစ်၍ အခန့်မသင့်ပါက အချိန်မရွေးေ နာက်ဆုတ်ပျ က်စီး သွားနိုင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒုတိယ သမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းက ယမန်နေ့ ကပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးေ ဖာ်ေ ဆာ င်ေ ရး လုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင်ပြောကြားသွားသည်။
At 8/13/2012 01:14:00 PM No comments:
မန္တလေးမြို့၊အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ညောင်ကွဲရပ်တွင် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွား ခဲ့ေ ကြာင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ကလေး တစ်ဦးဒဏ်ရာရှိသွားကြောင်း ကနဦးသတင်းရရှိပြီး သတင်း အပြည့် အ စုံအား မကြာမီတင်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
At 8/13/2012 12:41:00 PM No comments:
တွေ လုပ်မလဲ ဆိုတာကို ရန်ကုန် အရှေ့ပိုင်း တက္ကသိုလ် ဆရာ၊ ဆရာမများ အသင်း ဖြစ်မြောက်ရေးကို ဦးဆောင်ခဲ့သူ အဲဒီ တက္ကသိုလ် သမိုင်းဌာနရဲ့ လက်ထောက် ကထိက ဆရာ ဦးသန်းထိုက်အောင်ကို ဘီဘီစီက ဆက်သွယ် မေးမြန်း ထားပါတယ်။
နားထောင်လိုပါက ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။
At 8/13/2012 12:38:00 PM No comments:
At 8/13/2012 12:35:00 PM No comments:
ဒဂုံဧရာ အဝေးပြေးကားဝင်း၌ လူသေမှုဖြစ်ပွား
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လှိုင်သာယာ မြို့နယ် ဒဂုံဧရာ အဝေးပြေး ကားဝင်း အတွင်းရှိ သမာဓိကား ဂိတ် အရှေ့တွင် လူတစ်ဦး သေဆုံး နေကြောင်း သတင်း ရရှိသဖြင့် တာဝန်ရှိသူများ သွားရောက် စစ်ဆေးရာ အဆိုပါ လူငယ်မှာ ယာဘက် မျက်ခုံးကွဲ၊ ငယ်ပါကွဲ၊ ရင်ညွန့်နှင့် ဘယ်ဘက် လက်ပွန်းပဲ့ ဒဏ်ရာ များဖြင့် သေဆုံး နေကြောင်း တွေ့ရသည်။အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်မှာ ဦးစန်းယုဝင်း ၏ သား မောင်ဝင်း ကိုကို အသက် ၁၇ နှစ် သည် သြဂုတ် ၇ ရက် နံနက် ၄ နာရီ ခန့်က အိမ်မှ ထွက်သွားရာ ပြန်လည် ရောက်ရှိ လာခြင်း မရှိသဖြင့် မိဘများက လိုက်လံ ရှာဖွေရာ မတွေ့ရှိဘဲ သြဂုတ် ၈ ရက် နံနက် ၅ နာရီခွဲက အဝေးပြေး ဝင်း၌ လူတစ်ဦး သေဆုံးနေ ကြောင်း သိရသဖြင့် သွားရောက် ကြည့်ရှုရာ ဦးစန်းယုဝင်း ၏သား မောင်ဝင်း
At 8/13/2012 12:05:00 PM No comments:
ယမန်နေ့( သြဂုတ် ၁၂ ) က ပူတာအိုနေ ပြည်သူများ အတွက် လိုအပ် လျှက်ရှိသောဆန်နှင့် အခြား စာနပ်ရိက္ခာများ သွားရောက်ပို့ဆောင်
At 8/13/2012 11:57:00 AM No comments:
At 8/13/2012 11:34:00 AM No comments:
At 8/13/2012 10:53:00 AM No comments:
ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါ အပျော့စား ကို ဖြေဖျော က်နိုင်ရန်အတွက် မိမိဘာသာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရသော နည်းလမ်းများ အကြောင်းကို Singapore General Hospital မှ စိတ်ကျန်းမာရေး ဆရာဝန် ဒေါက်တာ Lee Huei Yen က ပြောပြထားပါသည်။
At 8/13/2012 10:05:00 AM No comments:
At 8/13/2012 09:49:00 AM No comments:
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အကြမ်းဖက်မှု စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တောရှိ ဒေသခံများက ၎င်းတို့၏ လက်ရှိ နေ ထိုင်ရာ နေရပ်ရင်းကို စွန့်၍ ရခိုင်လူမျိုးအများ စုရှိရာ နေရာများ ကို ပြောင်းရွှေ့နေ လိုကြကြောင်း ပြောဆိုနေကြသည်။မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက်ခြမ်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်နှင့် ထိစပ်နေသည့် ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တောမြို့တို့တွင် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းေ ကျာ်ရှိရာ ဒေသခံ လူနည်းစု ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများက အကြမ်းဖက်မှုများ ထပ်မံရင်ဆိုင် ရမည်ကို
At 8/13/2012 09:45:00 AM No comments:
ယနေ့တွင် ကျရောက်သည့် ၆၂ နှစ်မြောက် ကရင်အာ ဇာနည်နေ့အခမ်း အနားတရပ်ကို ကရင်ပြည်နယ်လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် ရှိ ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာ ၇ ဌာနချုပ်တွင် ကျင်းပ ခဲ့သည်။ အခမ်းအနားတွင် KNLA တပ်မဟာ ၇ တပ်မဟာမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စောေ ဂျာ်နီ က ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့နှင့်အတူ ကရင်အ မျိုးသားအ လံ နှင့် ကျဆုံးသွားသည့်အာဇာနည်များကို တက်ေ ရာက် လာ သည့် က ရင်အမျိုးသားများနှင့်အတူ အလေးပြုခဲ့ကြပြီး ကရင်အမျိုးသား အစည်း အ ရုံး KNU ဥက္ကဌပေးပို့ခဲ့သည် ကရင်အာဇာနည်နေ့မိန့်ခွန်းကိုပဒိုလေးတောကဖတ်ကြားခဲ့သည်။
At 8/13/2012 04:40:00 AM No comments:
သြဂုတ်လ၊ ၁၃ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁ နာရီအချိန်တွင် ကမ္ဘာ အေးဘုရားလမ်းပေါ်ရှိ သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာန ရုံးဟောင်းအနီး စာတိုက် မှတ်တိုင်တွင် စုရပ်လုပ်၍ ဟာ့ဂ်ျ ခရီးသွားကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သြဂုတ်လ၊ ၁၃ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁ နာရီအချိန်တွင် ကမ္ဘာ အေးဘုရားလမ်းပေါ်ရှိ သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာန ရုံးဟောင်းအနီး စာတိုက် မှတ်တိုင်တွင် စုရပ်လုပ်၍ ဟာ့ဂ်ျ ခရီးသွားကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အစ္စ လာမ်ဘာသာဝင် (၁ဝဝ)ခန့် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း သြဂုတ်လ၊ ၁၁ ရက်နေ့ နေ့လည် (၃)နာရီတွင် ပြုလုပ်သော ခရီးသွား ကုမ္ပဏီများ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ မှ သတင်းရရှိသည်။ ''အဓိကဖော်ထုတ်မှာက တော့
At 8/13/2012 04:31:00 AM No comments:
At 8/13/2012 01:03:00 AM No comments:
At 8/13/2012 01:02:00 AM No comments:
2012 ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ 12 ရက်နေ့ မနက် 1200 ချိန်မှာ မြောင်းမြမြို့၊ NLD ပါတီက ဦးမြင့်ကျော်ဦးဆောင်ပြီးတော့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ မြို့နယ်အသီးသီးက 11 ရက်နေ့ညမှာ လာရောက်ပူးပေါင်းကြတဲ့ ပါတီဝင်များနဲ့ စုစုပေါင်း အင်အား (500)ခန့်ဟာ
At 8/13/2012 12:46:00 AM No comments:
Azad Maidan ဆိုတဲ့နေရာက မွန်ဘိုင်းမြို့ (ဘုံဘေမြို့) မှာ ဆန္ဒပြဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာပါ။ အဲ့ဒီနေရာမှာ မြန်မာပြည်က ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်တဲ့ ပဋိပက္ခ၊ အာသံပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့ ပဋိပက္ခတွေမှာ လူနည်းစု အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေအပေါ် ဖိနှိပ်မှုတွေ လုပ်နေတာကို ဆန့်ကျင်တယ် ဆိုပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာအသင်းအဖွဲ့တွေက စုဝေး ဆန္ဒပြနေခဲ့ကြတာပါ။
At 8/13/2012 12:36:00 AM No comments:
ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးဌာနနှင့် တိုကျိုအခြေစိုက် ဂျပန်ကားကုမ္ပဏီတို့ အကျိုးတူပူးပေါင်းပြီး အဝေးပြေးယာဉ်များနှင့် အများပြည်သူသုံး မော်တော်ယာဉ် (ဘတ်စကား) ၃ဝဝဝ ခန့် တင်သွင်း မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
At 8/13/2012 12:29:00 AM No comments:
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် အပါအဝင် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီး ၉ ဦးကို လူမှန်း သိတတ် ကတည်းက မိသားစုတွေ စာအုပ်စာတမ်းတွေက တစ်ဆင့်သိခဲ့ ကြားခဲ့ ရပါတယ်။ အခုလို ၆၅ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့မှာ တိုင်းပြည် လွတ်လပ်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ လှုပ်ရှားနေ ဆဲ ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းဆောင် များနဲ့ ပြည်သူလူထုကို အာဇာနည်ကြီး များက အားပေးဂုဏ်ယူဆဲ ပဲဖြစ်မှာပါ။
At 8/13/2012 12:24:00 AM No comments: